Xarunta Xakameynta Cudurrada ayaa ku warantay in ay shaqaale toban ka badan u dirtay magaalo ku taalla xuduudda dalka Jamhuuriyadda Dimoqraadiga ah ee Congo iyo Rwanda si ay u mareeyaan dadka uu cudurka Ebola halkaasi ku haleelay.
Xanuunkan oo sanad kahor dalkaasi ka dillaacay ayaa galaaftay nolosha dad ka badan 1800. Hey'adda ayaa sheegtay in ay shaqaale kale oo dheraad ah diri doonto haddii uu qaboobo dagaalka ka socda gobolka waqooyi bari ee dalkaasi.
12 kamid ah shaqaalaha Xarunta Xakameynta Cudurka ayaa loo diray magaalada Goma oo ah magaalo halbowle u ah u-kala-gooshidda dalalka Congo iyo Rwanda. Goma ayaa laga helay qofkii afaraad oo uu Ebola soo rito.
Hey'adda Caafimaadka Adduunka ayaa sheegtay in qof afaraad uu xanuunkan kusoo rito magaaladaasi soohdinta ku taalla ay walaac xooggan abuureyso.
Agaasimaha Xarnta Xakameynta Xanuunka Ebola Dr. Robert Radfield ayaa bartiisa Twitter-ka ku sheegay in iska-hor-iaamdyada hubeysani ay curyaaminayaan dadaallada saraakiisha caafimaadka ee ku howlan joojinta faafista cudurka, taasoo buu yiri sare usii qaadeysa halista sii faafiddiisa.